တနင်္လာနေ့, ဇွန်လ 4, 2012 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Adam အသေးစား
ကြီးမားတဲ့လမ်းအတွက်မိုဘိုင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုလက်ခံဖို့စီစဉ်? ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းနည်းဗျူဟာများကိုအမြင့်ဆုံးမြှင့်တင်ရန်မျှော်လင့်ထားခြင်းသို့မဟုတ်အလုပ်မလုပ်ခြင်းများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းများစွာရှိသည်။ အောက်ပါအကြံပေးချက်များကိုဂရုပြုပါ -
ချောမွေ့စွာနည်းပညာ - မိုဘိုင်းဆက်သွယ်မှုအတွက်နည်းပညာသည်အပြည့်အဝမရောက်ရှိသေးသော်လည်းကုမ္ပဏီများကသင့်သည် သူတို့ရဲ့ဗိသုကာကို cloud-based ပလက်ဖောင်းပတ်ပတ်လည်တွင်အခြေပြုသည် အကြောင်းအရာများ၊ မှတ်တမ်းများ၊ လူမှုရေး feeds များ၊ ကိရိယာဒေတာ၊ SaaS ဝန်ဆောင်မှုများ၊ analytics နှင့်ပိုပြီး။
ခေါ်ရန်ရန်လှုပ်ရှားမှု - သတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်အသိပညာဖြန့်ဖြူးခြင်းအပေါ်အဓိကထားသည့်ရိုးရာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပုံစံများအတွက်လည်းမှန်ကန်သည်။ သို့သော်အောင်မြင်မှုအတွက်ဂါထာသည်လုပ်ငန်းတာ ၀ န် ၀ န်ဆောင်မှုအတွေ့အကြုံကိုပေးသောမိုဘိုင်းဆက်သွယ်မှုအတွက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ သင်၏ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းကိုဇောက်ထိုးလှန်လှောပြီးပုံစံများအစားလုပ်ဆောင်မှုခလုတ်များကိုလှည့်ပါ၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဖောက်သည်များ၏တုန့်ပြန်မှုကို interface နှင့်အမှတ်တံဆိပ်တို့နှင့်တန်းတူထားသည်။
analytics - မိုဘိုင်းအတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းသည်များစွာကြိုးစားအားထုတ်နိုင်သည် analytics မကြာခဏတစ်ခုရူပါဖြစ်လာသည်။ သို့သော်မိုဘိုင်း application များ၏ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်နှင့်အတူ analytics သူတို့ရဲ့ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူပစ္စည်းများ (SDKs) သို့မဟုတ်သမားရိုးကျပေါင်းစပ်ခြင်းမှတဆင့် analytics ဖြစ်ရပ်များကိုဖမ်းယူရန်ကာတွန်းဖန်သားပြင်နှင့်တက်ကြွသောစာမျက်နှာများတွင်အရာအားလုံးမှန်ကန်စေရန်သင်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပြက္ခဒိန်တွင်အချိန်ကိုထားရန်လိုအပ်သည်။
လူမှုမီဒီယာ - မိုဘိုင်းမှတစ်ဆင့် login စွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း၊ app ဖြန့်ကျက်ခြင်း၊ လူမှုရေးဝေမျှခြင်းအထိလူမှုရေးသည်မိုဘိုင်းအသုံးပြုမှုတွင်ကြီးမားသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်မှုနည်းဗျူဟာ၏အောင်မြင်မှုသည်စီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုဒီဇိုင်းအပေါ် မူတည်၍ သုံးစွဲသူ၏နေ့စဉ်ဘဝသို့မဟုတ်အလုပ်ကိုဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည်။
ဒေသဆိုင်ရာ - SOMOLO သည်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဗန်းစကားမျှသာမဟုတ်ပါ၊ လူမှုရေးမိုဘိုင်းဒေသခံ မိုဘိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာ applications များနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအမျိုးအစားဖော်ပြသည်။ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုသည်ဒေသအလိုက်မဟုတ်သည့်တိုင်ပထဝီဝင်အနေအထားကိုသင်၏မိုဘိုင်းနည်းဗျူဟာနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းက ပို၍ လှုပ်ရှားမှုများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်း (SMS) အသက်ရှင်သေး၏။ ယင်း၏ရောက်ရှိမှုသို့မဟုတ်အလွန်ရိုးရှင်းသောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများမှတဆင့်ရရှိနိုင်သောရလဒ်များကိုလျှော့မတွက်ပါနှင့်။
အီးမေးလ်လိပ်စာ - Yahoo! visitors ည့်သည်အားလုံး၏ ၂၀% သည်မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့်လာရောက်လည်ပတ်သည်ဟုသတင်းများကဖော်ပြသည်။ ငါတို့သိသည် မိုဘိုင်းအီးမေးလ်ကိုဖွင့်နှုန်းထားများ ကြောင်းနှစ်ကြိမ်နီးလာနေကြသည်။ သင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင် မျက်နှာပြင်ငယ်အတွက်သင့်အီးမေးလ်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းအနည်းဆုံးတော့ရှေးလူတန်းစားတွေကစာမဖတ်တတ်ကြဘူး။
မိုဘိုင်း App များ - Facebook, Youtube၊ ဓာတ်ပုံအက်ပ်များ၊ တေးဂီတမျှဝေခြင်း၊ ပထ ၀ ီနေရာချထားခြင်းစသည့်အခြားမိုဘိုင်း application များမည်မျှလူကြိုက်များသည်ကိုမမေ့ပါနှင့်
မျက်နှာပြင်ငယ်များ ပိုကြီးလာပြီ ... ပိုမြင့်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြနေတယ်။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားနှင့် resolution ကိုအခွင့်ကောင်းယူသည့်တုန့်ပြန်သည့် application များကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ခြင်းသည်အသုံးပြုမှုနှင့်ထိတွေ့မှုတို့ကိုတိုးပွားစေသည်။
လုံခွုံရေး - စမတ်ဖုန်းများကိုတိုက်ခိုက်ရန်ဟက်ကာများသည်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းရှိနေပြီးသင့်ကုမ္ပဏီ၏အက်ပလီကေးရှင်းတွင်အားနည်းချက်များကို အသုံးပြု၍ ဟက်ကာသည်စမတ်ဖုန်းသို့ malware ထည့်သွင်းရန်သင်နောက်ဆုံးလိုအပ်သည်။
ဤရွေ့ကားချဉ်းကပ်မှုအသစ်တစ်ခုလိုအပ်နိုင်ပါသည် Mobility Officer သူသည်အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါ ၀ င်ပြီးအထူးနည်းပညာဆိုင်ရာဌာနတစ်ခု၏အကြီးအကဲတစ် ဦး မဟုတ်ဘဲမိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးနည်းဗျူဟာများကိုဖယ်ရှားရန်အရည်အချင်းရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ဗီဒီယို - အမှတ်တံဆိပ်ဆိုတာဘာလဲ။
7:2012 pm မှာဇွန် 11, 12
ဇွန် 7, 2012 မှာ 7: 53 pm တွင်
ဤရွေ့ကားမိုက်ကယ်, ရှေးရှေးမကြာခဏအာရုံမစိုက်သောထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြသည်။ ငါအကြောင်းအရာ # 1 ကြောင်းငြင်းခုန်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်။
8:2012 pm မှာဇွန် 4, 23
ဒေါက်ဂလပ်ရဲ့ပြန်ကြားချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သင်ဖော်ပြခဲ့သောမဟာဗျူဟာထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများသည်တန်ဖိုးရှိပါသည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော့်အတွေ့အကြုံအရလူတွေဟာအကြောင်းအရာတွေကိုသိပ်ဂရုမစိုက်ကြဘူး။ - / သူတို့ဟာနည်းစနစ်၊ ကိရိယာတွေ၊ လမ်းကြောင်းတွေစသဖြင့်ပိုပြီးအာရုံစိုက်လေ့ရှိတယ်။ အကြောင်းအရာဟာအရေးကြီးတယ်။ ဒါပေမယ့်ကြီးမြတ်အကြောင်းအရာအရာအားလုံးပါပဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် & အကောင်းဆုံး, Michiel